Saturday November 21, 2020 - 12:15:41 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Mid kamida gobollada ugu muhiimsan dhanka siyaasadda dalka Mareykanka ayaa soo saaray go'aan kama dambays ah oo ceel dheer kusii ridaya rajadii uu Trump ka qabay in uu ku guuleysto doorashooyinkii madaxtinimo ee dhawaan dhacay.
Gobolka Georgia wuxuu si rasmi ah u caddeeyay in murashaxa xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden uu ku guuleystay codadka guddiyada doorashada ee gobolka kadib markii uu si gacan ah dib ugu tiriyay dhammaan codadkii ladhiibtay halka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu doonayo inuu ka dhaadhiciyo hoggaamiyeyaasha xisbiga Jamhuuriga ee golayaasha baarlamaanka ee gobollada in ay joojiyaan ansixinta natiijada doorashada ee gobollada muhiimka ah, gaar ahaan Michigan iyo Pennsylvania.
Ololaha doorashada Trump waxaa ciriiri kasii gelaya dhammaan fursadihii ay ku doonayeen in ay ku duraan guushii uu musharaxa xisbiga dimuquraadiga ah ka gaaray doorashooyinkii dhacay horraantii bishaan.
Xoghayaha Gobolka Georgia Brad Ravensberger wuxuu sheegay in dib u tirinta gacanta ee codbixiyaasha doorashadii madaxtinimada ee dhacday seddexdii bishaan ay xaqiijisay guushii Joe Biden islamarkaana ay adkaynayaan guuldarra Trump.
Ravensburger wuxuu intaa ku daray in tiradaasi ay xaqiijisay in Trump uu ku khasaaray doorashooyinka Georgia waxay leedahay 19 xubnood oo ka socda 538 guddi ee dooran doona madaxweynaha Mareykanka bartamaha bisha soo socota.
Saraakiisha gobolka Georgia waxay xaqiijiyeen in natiijada ugu dambeysa ee dib u tirinta gobolka ay xaqiijisay guusha Biden ee gobolka, durbadiiba taageerayaasha Biden ayaa bilaabay dabaaldegyo ay ku muujinayaan natiijada rasmiga ah ee kasoo baxday gobolkan oo dadkiisu ay sanaddii 2016 taageera xooggan siiyeen madaxweynaha xilkiisu sii dhamaanayo ee Trump.
murunkii ka dhashay doorashadii madaxtinimada ee dhowaan ka dhacday 50-ka gobol ee mareykanku ka koobanyahay ayaa wali taagan, Biden ayaa isku arka madaxweynaha saxda ah halka Trump uu isna sheeganayo in uu guuleystay oo afarta sano ee soo socota uu wadanka sii maamulayo